Stavanger / stəvæŋər / (Noorwiijiga: [stɑʋɑŋər] (ku saabsan codkani wuxuu dhagaystaa)) waa magaalo iyo degmo oo Norway ah. Waa magaalada saddexaad ee ugu weyn  iyo aagga magaalooyinka  ee Norway (iyada oo loo marayo isku xirka Sandnes deriska ah) iyo xarunta maamulka ee gobolka Rogaland. Degmadu waa afartii ugu badneyd ee Norwey. Waxaa ku yaala jasiiradda Stavanger ee ku taala koonfur-galbeed ee Norway, Stavanger wuxuu ku xisaabtamayaa sanadka rasmiga ah ee sannadka 1125, sanadka oo dhammaystiray Cathedral Stavanger. Dabeecadda Stavanger waxay u tahay dhismayaal badan oo ah 18-iyo qarniyaal alwaax ah  oo la ilaaliyo oo loo tixgeliyo qayb ka mid ah hidaha dhaqanka magaalada. Tani waxay sababtay in bartamaha magaalada iyo magaalada hoose ay ka dhigto dabeecad yar oo magaalad leh qadar aad u sarreeya oo guryo dabaq ah,  waxayna si weyn uga qayb qaadatay kobaca dadweynaha magaalada si ay qaybo ka baxsan ee Greater Stavanger.
Kobaca dhaqaale ee magaalada ee qarnigii 20aad ayaa ugu dambeyntii keenay natiijadii ka dhalatay ganacsiga shidaalka ee saliida ee Norway. Maanta shirkadaha shidaalku waa warshad muhiim ah oo ka jirta gobolka Stavanger, magaaladana waxaa loo yaqaan 'Oil Capital of Norway'.  [kuma jiraan cinwaanka la siinayo] Shirkadda ugu weyn ee gobolka Nordic, shirkadda Norwegian Energy Statoil waxay xarunteedu tahay Stavanger. Machadyada tacliinta kala duwan ee tacliinta sare waxay ku yaalaan Stavanger. Kuwa ugu weyn ee ka mid ah waa Jaamacadda Stavanger.
Qalabaynta gudaha iyo kuwa caalamiga ah waxay ku yaalaan Stavanger, kuwaas oo ka mid ah Xarunta Wadajirka Dagaalka ee Wadajirka ah ee North Atlantic Treaty Organization. Hay'adaha kale ee caalamiga ah, iyo gaar ahaan waaxaha maxaliga ah ee shirkadaha saliidda iyo gaaska shisheeye, ayaa gacan ka geysta dadweynaha ajaaniibta ah ee magaalada ku nool. Muhaajiriinta waxay ka kooban yihiin 11.3% dadweynaha Stavanger.  Stavanger ayaa tan iyo horraantii sannadkii 2000-yadii si joogto ah u ahaa heerka shaqo la'aanta si ka hooseysa celceliska Norway iyo Yurub. Sanadkii 2011, heerka shaqo la'aanta wuxuu ka yaryahay 2%.  Magaaladu sidoo kale waxay ka mid tahay kuwa soo noqnoqonaya liiska kala duwan ee magaalooyinka qaaliga ah ee adduunka, Stavanger ayaa xitaa loo magacaabay magaalo ugu qaalisan magaalooyinka adduunka oo qaali ah.   
Stavanger waxaa bixiya Garoonka Caalamiga ah ee Stavanger, Sola, kaas oo bixiya duulimaadyo magaalooyin badan oo ku yaala wadamada ugu waaweeyn Yurub, iyo sidoo kale tiro kooban oo ah duulimaadyo shisheeye oo dhexdhexaad ah. Garoonka diyaaradaha waxaa loo magacaabay garoonka diyaaradaha ee ugu xiisaha badan Yurub 2010 by airstats.com. 
Labadii sanaba mar, Stavanger wuxuu qabanqaabiyaa Dibada Northern Seas (ONS), taas oo ah bandhigga labaad ee ugu weyn iyo shirweynaha qaybta tamarta. Damaashaadka Gladmat waxaa kaloo lagu qabtaa sanad kasta waxaana loo tixgeliyaa inuu yahay mid ka mid ah dabbaaldegyada cuntada ee Scandinavia. Magaaladan waxaa sidoo kale loo yaqaanaa mid ka mid ah mid ka mid ah kooxaha ugu caansan dalka. Stavanger 2008 Hiddaha Yurub ee dhaqanka. Stavanger waxaa lagu abaalmariyay 2008 Capital Capital of Culture oo ay weheliso Liverpool.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Stavanger&oldid=183213"
Boggan waxaa markii ugu dambeysay wax laga bedelay 13:57, 19 Oktoobar 2018.